ရန်ကုန်မှာ အင်တာနက် Connection အမြန်နှုန်း ကျဆင်း | Mandalaygazette's Weblog
ရန်ကုန်မှာ အင်တာနက် Connection အမြန်နှုန်း ကျဆင်း
Myanma News, News May 28, 2010 Comments: 4
ရန်ကုန်မြို.နှင့် မြန်မာပြည်အနှံ့ Internet Connection မှာ အလွန်ဆိုးရွားစွာ နှေးကွေးသွားပါတယ်။ Yadanapon Teleport မှ ဘာကြောင့်နှေးတယ်ဆိုတာ အခုထိ သတင်းမထုတ်ပြန်သေးပါဘူး။ Online နဲ့ လုပ်ရတဲ့ လုပ်ငန်းများစွာ အခုလို နှေးကွေးမှုကို မကြာမကြာ ခံစားနေရဆဲပါ။ လုပ်ငန်းများစွာကို ထိခိုက်စေပါတယ်။
စက်မှုနိုင်ငံတည်ဆောက်ဖို့ မီး လိုအပ်ပါတယ်။ ခေတ်မီနိုင်ငံ တည်ဆောက်ဖို့ သတင်း မီဒီယာ လွတ်လပ်ခွင့်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုတာ ဖြစ်နေမယ်ဆိုယင် နိုင်ငံတကာနှင့် အမီ လိုက်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။ အရာအားလုံးမှာနောက်ကျနေပါတယ်။ နိုင်ငံတကာနဲ့ ဆက်သွယ်ဖို့ IT နဲ့လဲလုပ်ရမှာပါ။ အခုလို IT ကို ပါ အဆင်ပြေအောင် မလုပ်ပေးနိုင်ယင် . . . .ဆက်ပြီးသာ လိမ်နေမယ်၊ မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမယ်ဆိုယင် . . .
အပျိုကြီး၊လူပျိုကြီး ဖြစ်ရခြင်းအကြောင်း →
4 thoughts on “ရန်ကုန်မှာ အင်တာနက် Connection အမြန်နှုန်း ကျဆင်း”
theingarkyaw May 28, 2010 at 8:54 am Reply
internet ကတော့ ပြောမနေပါနဲ့တော့.. အသက်ငင်နေသလို မျှဉ်းမျှဉ်း လေးပဲ ပေးထားတာ.. google မှာ search လုပ်ဖို့လည်းကြာ.. page လေးတစ်ခု တက်ဖို့ အကြာကြီး စောင့်ရ၊ download ကတော့ ဝေးရောပါပဲ.. chat လောက်ပဲ ကောင်းကောင်းရတာ…
ဘာအကြောင်းပြချက်ကြောင့်လဲတော့ မသိပါဘူး.. ဒုက္ခတော့ တော်တော် ရောက်နေပြီ
intro May 28, 2010 at 3:01 pm Reply
ဟုတ်တယ်အစ်ကိုရေ… ဒီနေ့လည်း အရေးကြီးတဲ့ E-mail တစ်စောင်ကို စစ်ရင်းနဲ့ Attach 1.4 Mb ကို Download လုပ်တာ… ၄၅ မိနစ်လောက်ကြာတယ် အစ်ကိုရေ… ၀င်မရတာနဲ့… ပြန်ပြန်ကျသွားတာနဲ့… ဆိုင်ကပြောတော့ 512 နှစ်လိုင်းပါတဲ့ အစ်ကိုရေ..
timothy May 28, 2010 at 3:50 pm Reply
nanu May 31, 2010 at 6:30 am Reply
i can’t download songs well… 😦